Herer News Network - Get Latest News Herer News Network - Qareenka Donald Trump Oo Sidii Xisbiga Wadani Yidhi “Waxaa Codeeyay Dad Dhintay” Qareenka Donald Trump Oo Sidii Xisbiga Wadani Yidhi “Waxaa Codeeyay Dad Dhintay”
Hargeisa(Herer). Rudy Giuliani Qareenka Madaxweyne Donald Trump oo ka hadlayay magaalada Philadelphia ayaa sheegay in ay saluugsan yihiin habka tirinta codadka doorashada gobollada qaar oo ay ka mid yihiin Wisconsin iyo Pennsylvania, ayna dalbadeen in dib loo tiriyo codadka.
Wuxuu ku andacooday in dad dhintay ay codeeyeen, ayna ogaan doonaan tirada reer aakhiraadka ah ee codeysay.
Madaxweyne Trump ayaa dacwad ka gudbiyay natiijada doorashada ee meelaha qaar, waxaana ay ku andoocdeen in musuqmaasuq uu hareeyay, inkastoo aanan caddeyn rasmi ah loo heynin.
“Way dhammaatay.. Waan ku guuleysaneynaa doorashadan, runtii waan ku guuleysannay, waa in keliya si caddaalad ah loo xisaabiyaa codadka,” Giuliani ayaa sidaas u sheegay warbaahinta, isagoo ku sugan gobolka Pennsylvania.
Gudoomiyaha Xisbiga Wadani C.raxmaan Cirro ayaa markii doorashada Somaliland looga guulaystay wuxuu sidan oo kale sheegay inay codeeyeen dad dhintay.
Dhinaca kale Suurtogalnimada ah rabshado ka dhaca Mareykanka, sababo la xidhiidhra doorashada aan weli kala caddeyn, ayaa saldhig u ah tebinta warbaahinta dhowr dal. Meelaha qaar, waxaa arrintan looga gol leeyahay in lagu wiiqo Mareykanka.
Raadiyaha dowladda ee Iiraan ayaa soo tebiyay rabshado ka dhacay Los Angeles, Seattle iyo Minneapolis, waxayna hadalka u dhigeen in dibadbaxayaashu “ay hubeysan yihiin oo aysan ka baqeyn booliiska”.
“Rabshado, hub. Waa wax aalaaba lagu yaqaanno doorashooyinka dalalka soo koraya,” ayuu yiri qof faallo ku qoray wargeyska Global Times ee dalka Shiinaha. “Wax ka dhacaya doorashada Mareykanka waa wax aynaan marnaba sawiran inay ka dhici doonaan dalkan ‘Astaana u ah Xorriyadda’.”
Gudaha Ruushka, telefishinnada dalkaas ayaa sidoo kale soo bandhigaya sawirrada iyo muuqaallada isku dhaca dibadbaxayaasha iyo booliiska ee magaalada New York iyo magaalooyin kale.
Dad badan oo wax falanqeeya ayaa qaba in natiijada ka soo baxda doorashada ay sii kala qeybin doonto Mareykanka.
Waxaa sidoo kale jira aragti ah sida rabshado dhaca iyo arrimo kaleba ay u wiiqi karaan dimquraaddiyadda Mareykanka.
“Ceebta Ameerika” waa cinwaanka wargeyska Standard ee dalka Kenya ka soo baxa, waxaana sawir looga dhigay ciidamada Mareykanka oo qoryo ku dhex wata waddooyinka.
Warbaahinta Turkiga ayaa sidoo kale tebinteeda ku dartay “rabshado” xilli ay socoto tirinta codadka.
Xafiiska ololaha doorashada ee Madaxweyne Donald Trump ayaa labo dacwadood ka gudbiyay natiijada gobollada Michigan iyo Pennsylvania oo labaduba uu ku guuleystay Joe Biden.
Dacwadahan ayay kooxda Trump ku sheegeen inay tahay mid ay uga ashtakoonayaan in wakiiladoodii doorashada aanan fursad loo siinin inay gudaha u galaan halka lagu tirinayo codadka.
Dacwad taas la mid ah ayay kooxda Trump ka gudbiyeen Wisconsin, halkaas oo Biden uu ku guuleystay, waxaana ay dalbanayaan in dib loo tiriyo codadka.
Garyaqaan Maxamed Geeljire Oo Ka Hadlay Qiimaha Wadaniyadu Leedahay
Gabaygi Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi
Iskashatada Gobolka Salal Oo U Jawaabay Badhasabka Gobolka Ee Somaliland
Taariikh Nololeedkii AHN Abwaan Cali Saleebaan Bidde
Waxgaradka Beesha Jibril Abokor Ee Sacad Muuse Oo Aflagadeyey Madaxweyne Muuse Biixi
Rw Kuxigeenka Somalia Mahdi Gulaid Oo Kormeer Ku Tagay Degmada Daynile Ee Gobolka Banaadir
Dhalinyarada Konfurta Hargeisa Oo Ka Hadlay Aflagadadii Sheekh Cabdirahman Dheere Kula Kacay Deegaan...
Cabdiqani Salaf - Salaxley Noqon Mayso Magaalo Aad Ku Dawarsataan
Wasaarada Gaadiidka Oo Daah Furtay Xafiiska Adeegyada Buugaagta Iyo Bileedhada Luma
Beesha Garxajis Oo Ku Baaqday Xadhiga Faysal Cali Waraabe Iyo General Nuux Taani
Sheekh Aadan Siiro Oo Si Adag U Beeniyey Baloodho Danguuda Oo Xildhibaan Xasan Shahar Kula So Galgas...
Madaxweyne Farmaajo Oo Ka Hadlay Qadiyada Somaliland Iyo Somalia
Dhibatada Kala Haysata Dhalinyarada Iyo Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi
Hayada Shaqalaha Somaliland Oo Shaacisay Ardayda Ku Gulaystay Wasaarada Maaliyada
Mayar Shiine Ee Degmada Salaxley Oo Dhalilay Wax Qabadka Wasaarada Caafimadka Somaliland
Saadiq John Taliyaha Ciidanka Booliiska Ee Gobolka Banaadir Oo Farmaajo Afgambiyey Awoodii Gobolka B...
Maamulka Majeertenia Ee Puntland Oo Noqday Meel Lagu Bahdilo Beelaha Kale Ee Hartiga
Xildhibaan Si Kulul Uga Hadlay Dagaalkii BaladXaawo Iyo Ciidamada Kenya Ee Dalka Ku Sugan
Madaxweynihi Hore Cali Mahdi Oo Soo Bandhigay Talaabadii Ay Kula Dhqantay Villa Somalia
Somaliland Waxay Dhabarka Usarantahay 70 Jir Iyo 80 Jir Talo Iyo Tacab Midhna Ku Hadhin
Dawlada Somalia Oo Ka Hortimid Xafiiska Taiwan Ee Somaliland
Geedkii Deeganka Haqayo Malaas Ee U Ku Dhintay AHN Mujahid Maxamed Cali
Samafale Coldoon Wuxu U Xidhanyey Beesha Muuse Biixi - Garyaqaan Mubarik Aar
Suldaan Kamida Waxgaradka Beesha Dhexe Oo Aflagadeyey Beelaha Darafyada Somaliland
« Raysal Wasaare Rooble Oo Magacaabay Gudiyada Doorashooyinka Dalka
Madaxweyne Ku Xigeenka Somaliland Mudane Saylici Oo Dalka Ku Soo Labtay »